Awekho akhombisa intshisekelo kuMabizela | News24
Awekho akhombisa intshisekelo kuMabizela
Durban – Kusalindeleke ukuthi ezwe ngekusasa lakhe umdlali wasemuza uMbulelo “Old John” Mabizela ngemuva kokulaxaza iqembu elagawulwa yizembe AmaZulu sekuphele inkontileka yakhe.
Lesi siqongqwane esineminyaka engu-34 ubudala sidlale ibhola elisezingeni eliphezulu ngesikhathi leli qembu lizama ukuvika izembe ngesizini edlule ka-2014/15 waphinde wakwazi nokushaya amagoli amagoli amane abalulekile.
Nakuba kunjalo leli qembu lihlulekile ukuvika izembe.
Lo mdlali oke wagijima kwiBafana Bafana ubezimisele ukuya naleli qembu ehlathini kodwa Usuthu lwaqoka ukungayivuseleli inkontielaka yakhe.
OLUNYE UDABA:Elase-Israel ligaqele ongavumelananga neChiefs
Umphathi wezindaba zakhe uMike Makaab utshele iKickOff ukuthi akakezwa lutho oluphathekayo ngalo mdlalo nakuba eke waxhuamana namaqembu ahlukene mayelana naye njengoba engenalo iqembu agijima kulona.
“Okwamanje akukho okusashintshile njengoba esazilolonga yedwa,” kusho uMakaab.
UMabizela uphume nenqwaba yabadlali kuMaZulu njengoba phakathi kwabadlali abashiye leli qembu kubalwa uBongani Ndulula, uPhilani Shange, Nkosinathi Mthiyane, Willem Mwedihanga, Rizaigh Gamildien noNhlanhla Shabalala.